HAY’ADDA SAVE THE CHILDREN OO WALAAC KA MUUJISAY ABAARTA SOOMAALIYA KA JIRTO. – XAMAR POST
By Mohamed Abdi Last updated Mar 22, 2021
Hya-adda Qaaramada Midoobe ee Xanaanada Caruurta Save the Children ayaa sheegtay in Ilaha biyaha ee Soomaaliya ayaa si xawli ah isu dhimayaan isla markaana ay jirto Abaar ba’an oo galaafaty nolosha Maaliyiin Ruux iyo Duunyo Badan.
Save The Children ayaa sidoo kale xustay in ay qarka u saaran yihiin qoysas lagu qiyaasay boqolkiiba 70 oo ku nool daafaha dalka biyo la,aan iyo in aysan helin biyo nadiif ah. Kumanaan carruur ah ayaa hadda ku tiirsan biyo dhaamis degdeg ah iyo ceelal aan la ilaalin nadaafadooda halka kuwa kalane ay Abbaartu ku qasabtay inay ka baxaan guryahooda si ay biyo u raadsadaan, sida lagu sheegay qiimeyn cusub oo ay soo saartay Save the Children.
Qiimeynta, oo lagu sameeyey 632 qoys oo ku baahsan sideed gobol oo Soomaaliya ah, ayaa muujinaya roob yari iyo biyo yari ba’an iyadoo sidoo kale Abaartu dishay xoolo badan iyo in Abaartu Sababtay dalag xumo iyo yaraynta dakhliga soo gala qoysaska, taas oo carruurta ka dhigi karta kuwa ay k usababto cunno yari iyo cuntada nafaqada leh oo ay waayaan .
In ka badan kala bar qoysaska la wareystay ma aysan helin cunno ku filan oo ay cunaan iyadoo boqolkiiba 84 dadka la wareystay ay sheegeen in ay la tacaalayaan dhibaatada ay ku keentay Abaarta, sida in ay xaaluf ka noqdeyn xoolahoodii iyo in ay yareeyaan tirada cuntada ee ay isticmaalin ​​maalin kasta si ay keyd ugu noqoto.
Hay’adda Save The Children ayaa ugu dambeyn sheegtay Haddii aan la helin gargaar bani’aadamnimo oo deg deg ah, in dhibaatadu ay kasii dari doonto tan iyo bisha Juun ee sanadkaan iyadoo tirada carruurta iyo dadka waaweyn ee u baahan taageero deg deg ah ay kor u kacayso 5.9 milyan – kororka 700,000 oo qof marka la barbar dhigo sandkii 2020.
BY: MOHAMED YAHYE JINOW